दाजु विदेशमा, देवरसँग भाउजु। बाहिरियो यस्तो…पूरा हेर्नुहोस् – PathivaraOnline
Home > बिचित्र > दाजु विदेशमा, देवरसँग भाउजु। बाहिरियो यस्तो…पूरा हेर्नुहोस्
admin January 19, 2021 January 19, 2021 बिचित्र, रोचक, समाचार	0
ती महिलाले देवरलाई घरमै बोलाएर सम्बन्ध कायम गरेको पनि स्वीकार गरेकी छिन्। दुबै परिवारले उनीहरुको व्यबहार नै शंकास्पद रहेको बताएका छन् । बच्चा हुर्किसकेकाले अब उनलाई जन्म दिनुको विकल्प उनीहरुसँग बाँकी छैन । यसैले अहिले देवर र भाउजुलाई गाउँलेले मिलेर जिम्मा लगाएका छन्
विषय प्रहरीसम्म पुगेको छ । प्रहरीले सहमतिमा नै सम्बन्ध कायम गरेको दुवैले स्वीकार गरेपछि र उजुर बाजुर नगर्ने एकसाथ बस्ने सहमति भएपछि मिलापत्र बनाउँने तयारी गरेको छ । तर किशोरको उमेर सानो भएकाले निगरानी राख्ने भएको छ । **यो समाचारको पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला**
दाजु विदेशमा,देवरसँग भाउजु। बाहिरियो यस्तो…पूरा हेर्नुहोस्
म,रेको मान्छेको चि,हान १२ बजे राती खन्नुको कारण बल्ल बुबाले बताए (भिडियो हेर्नुस्)
यी नै हुन बच्चा फाल्ने आमा, यस्तो छ रहस्य! आमाले थाहा पाइनन् छोरीको यस्तो हर्कत, बच्चाको के दोष ? (भिडियो सहित)
BREAKING…पोखरामा बालिका हत्याको घटना सेलाउन नपाउदै अर्को बलात्कार (सेयर गरीदीनुहोस)
दुःखद सिन्धुपाल्चोक पहिरोमा ज्यान गुमाउनेकाे सँख्या २९ पुगेपछि…